Phonetic အသံထွက် ဖတ်နည်းလမ်းညွှန် ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
Phonetic အသံထွက် ဖတ်နည်းလမ်းညွှန်
a) Short Vowels
b) Long Vowels
3. Consonant sounds ဟူ၍ အောက်ပါအတိုင်း အဆင့်အဆင့်ခွဲထားပါသည်။
(1) Vowel sounds (သရသံများ)
သရသံများတွင် short vowels အသံတိုနှင့် long vowels အသံရှည်ဟူ၍ အသံနှစ်မျိုးရှိသည်။
a) short vowels (သရသံတိုများ)
အောက်ပါအသံများကို တိုတိုပြတ်ပြတ် ဖတ်ရမည်။
ɪ /အစ်/ /အင်/
e /အက်/ /အဲ/
æ /အဲ/ /အဲ့/
ɒ /အော/ /အော့/
ə /အ/ /အာ/ /အယ်/
သတိ - ʊ နှင့် u တို့သည် ခပ်ဆင်ဆင်တူသဖြင့် မှားတတ်သည်။
b) Long vowels (သရသံရှည်များ)
အောက်ပါအသံများကို ရှည်ရှည်ဆွဲ၍ ဖတ်ရမည်။
ɜː (UK) / ɝː (US) /အား/
ɚ (US) /အာ/
(2) diphthongs (သရတွဲများ)
အောက်ပါအသံများကို (တွဲဖက်၍၊ ဆက်၍) မြန်မြန်၊ သွက်သွက် ရွတ်ဆိုရမည်။
əʊ /အိုး/ (British English)
oʊ /အိုး/ (American English)
ɪə /အစ်အာ/ /အစ်ယာ/
eə /အဲအာ/ /အဲယာ/ (UK)
ʊə /အွတ်အာ/ /အွတ်ယာ/ (US)
aɪə /အိုင်းအာ/ /အိုင်းယာ/
aʊə /အောင်းအာ/ /အောင်းယာ/
uə /အူအာ/ /အူယာ/
သတိပြုရန်။ ။ əʊ /အိုး/ နှင့် aʊ /အောင်း/ တို့၏ အရှေ့သင်္ကေတများသည် မသိမသာ ကွာခြားသောကြောင့် အထူးသတိပြုရမည်။ ə /အာ/ အသံတို့ကို အရှေ့မှ အသံထွက်များနှင့်ပေါင်း၍ မြန်မြန်ရွတ်ဆိုရမည်။
ဥပမာ - uə /အူအာ/ ကို ကြည့်ကြစို့။ အူ နှင့် အာ တို့ကို ပေါင်း၍ အူအာလိုလို အူယာ လိုလို ရွတ်ဆိုပါ။
(3) Consondant sounds (ဗျည်းအသံများ)
b /ဘ/ /ဘ်/
d /ဒ/ /ဒ်/
f /ဖ/ /ဖ်/
k /က ၊ ခ/ /က် ၊ ခ်/
l /လ/ /လ်/
m /မ/ /မ်/
n /န/ /န်/
p /ပ/ /ပ်/
r /ရ/ /ရ်/
s /စ/ /စ်/
t /တ ၊ ထ/ /တ် ၊ ထ်/
v /ဗ/ /ဗ်/
z /ဇ/ /ဇ်/
dʒ /ဂျ/ /ဂ်ျ/
ŋ /င/ /င်/
ʃ /ရှ/ /ရှ်/
tʃ /ချ/ /ခ်ျ/
သရသံနဲ့ ဗျည်းသံတို့ကို ပေါင်းပြီး ဘယ်လိုအသံထွက်တယ်ဆိုတာ လေ့ကျင့်ကြည့်ကြရအောင်။ ဗျည်းသံ (၂၄) သံနဲ့ သရသံ တို့ကိုပေါင်းသည့်အခါ /အ/ နေရာတွင် ဗျည်းသံများကို အစားထိုး၍ ဖတ်ရမည်။
ဥပမာ - bit / bɪt/ /ဘစ်(ထ်)/ ကို ကြည့်ရအောင်။
/ɪ/ /အစ်/ အသံထွက်သည့်စကားလုံးများ။
bit /bɪt/ /ဘစ်(ထ်)/
git /gɪt/ /ဂစ်(ထ်)/
lit /lɪt/ /လစ်(ထ်)/
pit /pɪt/ /ပစ်(ထ်)/
sit /sɪt/ /စစ်(ထ်)/
/e/ /အက်/ အသံထွက်သည့်စကားလုံးများ။
bet /bet/ /ဘက်(ထ်)/
pet /pet/ /ပက်(ထ်)/
set /set/ /စက်(ထ်)/
wet /wet/ /၀က်(ထ်)/
/æ/ /အဲ့/ အသံထွက်သည့်စကားလုံးများ။
bat /bæt/ /ဘဲ့(ထ်)/
cat /kæt/ /ကဲ့(ထ်)/
mat /mæt/ /မဲ့(ထ်)/
sat /sæt/ /စဲ့(ထ်)/
vat /væt/ /ဗဲ့(ထ်)/
/ʌ/ /အပ်/ အသံထွက်သည့်စကားလုံးများ။
but /bʌt/ /ဘပ်(ထ်)/
cut /cʌt/ /ကပ်(ထ်)/
nut /nʌt/ /နပ်(ထ်)/
rut /rʌt/ /ရပ်(ထ်)/
/ɒ/ /အော/ /အော့/ အသံထွက်သည့်စကားလုံးများ။
cot /kɒt/ /ခေါ့(ထ်)/
dog /dɒg/ /ဒေါ့(ဂ်)/
dot /dɒt/ /ဒေါ့(ထ်)/
pot /pɒt/ /ပေါ့(ထ်)/
rot /rɒt/ /ရော့(ထ်)/
/ʊ/ /အွတ်/ အသံထွက်သည့်စကားလုံးများ။
good /gʊd/ /ဂွတ်(ဒ်)/
put /pʊt/ /ပွတ်(ထ်)/
should /ʃʊd/ /ရွှတ်(ဒ်)/
took /tʊk/ /တွတ်(ခ်)/
would /wʊd/ /၀ွတ်(ဒ်)/
/ə/ /အ/ /အာ/ /အယ်/ အသံထွက်သည့်စကားလုံးများ။
ago /ə'gəʊ/ /အဂိုး/
another /ə'nʌð.ər/ /အနာ့ဿာရ်/
mother /'mʌð.ər/ /မာ့ဿာရ်/
normal /'nɔː.məl/ /နေားမယ်(လ်)/
vocal /'vəʊ.kəl/ /ဗိုးခယ်(လ်)/
/i/ /အီ/ အသံထွက်သည့်စကားလုံးများ။
be /bi/ /ဘီ/
cozy /'kəʊ.zi/ /ခိုးဇီ/
meanie, meany /'miː.ni/ /မီးနီ/
the /ði/ /ဿီ/
we /wi/ /၀ီ/
/u/ /အူ/ အသံထွက်သည့်စကားလုံးများ။
annual /'æn.ju.əl/ /အဲန်ယူယယ်(လ်)/
influence /'ɪn.flu.ənts/ /အင်န်ဖလူယန့်ထ်(စ်)/
situate /'sɪt.ju.eɪt/ /စစ်တျူယေ့(ထ်)/
to /tu/ /တူ/
/iː/ /အီး/ အသံထွက်သည့်စကားလုံးများ။
bee /biː/ /ဘီး/
gee /dʒiː/ /ဂျီး/
pea /piː/ /ပီး/
see /siː/ /စီး/
/ɑː/ /အား/ အသံထွက်သည့်စကားလုံးများ။
bar /bɑːr/ /ဘားရ်/
car /kɑːr/ /ခါးရ်/
father /fɑː.ðər/ /ဖါဿးားရ်/
far /fɑːr/ /ဖါးရ်/
/ɔː/ /အေား/ အသံထွက်သည့်စကားလုံးများ။
ball /bɔːl/ /ဘေား(လ်)/
call /kɔːl/ /ခေါး(လ်)/
door /dɔːr/ /ဒေါးရ်/
fall /fɔːl/ /ဖေါး(လ်)/
pore /pɔːr/ /ပေါးရ်/
/uː/ /အူး/ အသံထွက်သည့်စကားလုံးများ။
cool /kuːl/ /ခူး(လ်)/
flew /fluː/ /ဖလူး/
glue /gluː/ /ဂလူး/
school /skluː/ /စကူး(လ်)/
tool /tuːl/ /တူး(လ်)/
/ɜː/ /အား/ အသံထွက်သည့်စကားလုံးများ။
blur /blɜːr/ /ဘလားရ်/
cur /kɜːr/ /ခါးရ်/
her /hɜːr/ /ဟါးရ်/
word /wɜːd/ /၀ါး(ဒ်)/
/eɪ/ /အေ/ /အေး/ အသံထွက်သည့်စကားလုံးများ။
bay /beɪ/ /ဘေး/
day /deɪ/ /ဒေး/
pay /peɪ/ /ပေး/
say /seɪ/ /စေး/
/aɪ/ /အိုင်း/ အသံထွက်သည့်စကားလုံးများ။
buy /baɪ/ /ဘိုင်း/
cry /kraɪ/ /ခရိုင်း/
nine /naɪ/ /နိုင်း/
pile /paɪ/ /ပိုင်း(လ်)/
/ɔɪ/ /အွိုင်း/ အသံထွက်သည့်စကားလုံးများ။
alloy /'æl.ɔɪ/ /အဲလွိုင်း/
boy /bɔɪ/ /ဘွိုင်း/
oil /ɔɪl/ /အွိုင်း(လ်)/
noice /nɔɪz/ /နွိုင်း(ဇ်)/
/əʊ/ /အိုး/ အသံထွက်သည့်စကားလုံးများ။
bow /bəʊ/ /ဘိုး/
cold /kəʊld/ /ခိုးလ်(ဒ်)/
gold /gəʊld/ /ဂိုးလ်(ဒ်)/
know /nəʊ/ /နိုး/
soul /səʊl/ /စိုး(လ်)/
/aʊ/ /အောင်း/ အသံထွက်သည့်စကားလုံးများ။
allow /ə'laʊ/ /အလောင်း/
bow /baʊ/ /ဘောင်း/
how /haʊ/ /ဟောင်း/
now /naʊ/ /နောင်း/
wow /waʊ/ /ဝေါင်း/
/ɪə/ /အီးအာ/ /-ယာ/ အသံထွက်သည့်စကားလုံးများ။
ear /ɪər/ /အီးယာရ်/
dear /dɪər/ /ဒီးယာရ်/
hear /hɪər/ /ဟီးယာရ်/
near /nɪər/ /နီးယာရ်/
sear /sɪər/ /ဆီးယာရ်/
/eə/ /အဲအာ/ /-ယာ/ အသံထွက်သည့်စကားလုံးများ။
air /eər/ /အဲယာရ်/
bear /beər/ /ဘဲယာရ်/
chair /tʃeər/ /ချဲယာရ်/
their /ðeər/ /ဿဲယာရ်/
wear /weər/ /၀ဲယာရ်/
/ʊə/ /အွတ်အာ/ /-ယာ/ အသံထွက်သည့်စကားလုံးများ။
curate /'kjʊə.rət/ /ကျူးယာရယ့်(ထ်)/
during /'djʊə.rɪŋ/ /ဒျူးယာရင်း(င်)/
pure /pjʊər/ /ပျူးယာရ်/ /ပျွတ် - /
puree /pjʊə.reɪ/ /ပျူးယာရေး ၊ ပျွတ် - /
tour /tʊər/ /တွတ်ယာရ်/
/aɪə/ /အိုင်းအာ/ /-ယာ/ အသံထွက်သည့်စကားလုံးများ။
buyer /'baɪ.ər/ /ဘိုင်းယာရ်/
diary /daɪə.ri/ /ဒိုင်းယာရီ/
fire /faɪər/ /ဖိုင်းယာရ်/
lyre /laɪər/ /လိုင်းယာရ်/
wire /waɪər/ /၀ိုင်းယာရ်/
/aʊə/ /အိုးအာ/ /-ယာ/ အသံထွက်သည့်စကားလုံးများ။
bower /baʊ.ər/ /ဘိုးအာရ်/
lower /ləʊ.ər/ /လိုးအာရ်/
mower /məʊ.ər/ /မိုးအာရ်/
rower / rəʊ.ər/ /ရိုးအာရ်/
windower /'wɪd.əʊ.ər/ /၀စ်ဒိုအာရ်/
Other symbols used in the pronunciation
(အသံထွက်ရာတွင် သုံးသည့် အခြားသင်္ကေတများ)
/ə/ sudden /'sʌd.ən/ /ဆပ်ဒယ်(န်)/ တွင် - /ə/ /အယ်/ ၏ အသံကို (မထွက်တထွက်) တ၀က်ခန့်သာ ထွက်၍ဖတ်ပါ။
/r/ teacher /'tiː.tʃər/ /ထီးချာရ်/ တွင် - (UK English) သရအက္ခရာ၏ရှေ့မှ စကားလုံးသည် /r/ /ရ်/ သံနှင့်ဆုံးလျှင် /r/ /ရ်/ သံကို ထည့်ဖတ်၍၊ ဗျည်းအက္ခရာ၏ ရှေ့မှစကားလုံးသည် /r/ /ရ်/ သံနှင့်ဆုံးပါက /r/ /ရ်/ သံကို ထည့်၍ ဖတ်လေ့မရှိပါ။
/ˌl/ angel /'æŋ.gˌl/ /အဲ့င်ဂျယ်(လ်)/ တွင် - /ˌl/ သံကိုထွက်၍ ဖတ်ရမည်။
မှတ်ချက် - ကွင်းထဲမှ (-်) အသံများကို ထွက်၍ ဖတ်ပါ။
(ဖိရွတ်သံ၊ ဂရုသံပြ သင်္ကေတ)
ဖိရွတ်သံသင်္ကေတတွင် မြင့်သံ၊ နိမ့်သံဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။
စကားစုတစ်ခု၏ အပေါ်တွင် ယင်းသင်္ကေတကို ရေးထားလျှင် ယင်းစကားစုအသံကို မြှင့်၍၊ ဖိ၍ ဖတ်ရမည်။
ဥပမာ - picture /'pɪk.tʃər/ /ပစ်ချာရ်/
/pɪk/ ရှေ့တွင် /'/ ပါသောကြောင့် /'pɪk./ /ပစ်/ ကို မြှင့်ဆို၍ /tʃər/ /ချာရ်/ ကို ပုံမှန်အသံ ရွတ်ဆိုရမည်။
စကားစုတစ်ခု၏ရှေ့တွင် ယင်းသင်္ကေတကို ရေးထားလျှင် ယင်းစကားစုအသံကို နှိမ့်၍ ဖတ်ရမည်။
ဥပမာ - submarine /ˌsʌb.mə'riːn/ /ဆပ်ဘ်မရီး(န်)/ /sʌb/ ရှေ့တွင် /ˌ/ ပါသောကြောင့် /ˌsʌb/ /ဆပ်ဘ်/ ကို နှိမ့်ဆို၍ /mə/ /မယ်/ ကို ပုံမှန်အသံဖြင့် ရွတ်ဆိုပြီး 'riːn/ /ရီး(န်)/ ကို မြှင့်၍ ဆိုရမည်။
Homophones - (words that sound the same)
အသံတူ (အရေးကွဲ၊ အနက်ကွဲ) စကားလုံးများ
eg. My son isadoctor.
The sun is really hot today.
/iː/ /အီး/ အသံထွက်သည့် စကားလုံးများ။
bean - been /biːn/
be - bee /biː/
feat - feet /fiːt/
flea - flee /fliː/
leak - leek /liːk/
meat - meet /miːt/
peace - piece /piːs/
peak - peek /piːk/
peal - peel /piːl/
reed - read /riːd/
sea - see /siː/
seam - seem /siːm/
seen - scene /siːn/
steal - steel /stiːl/
suite - sweet /swiːt/
weak - week /wiːk/
weave - we've /wiːv/ /wiv/
/ɔː/ /အေား/ အသံထွက်သည့် စကားလုံးများ။
board - bored /bɔːd/
caught - court /kɔːt/ (UK)
coarse - course /kɔːs/
hoarse - horse /hɔːs/
sauce - source /sɔːs/ (UK)
saw - soar /sɔː/ /sɔːr/ (UK)
sort - sought /sɔːt/ (UK)
warn - worn /wɔːn/
/eɪ/ /အေး/ အသံထွက်သည့် စကားလုံးများ။
bale - bail /beɪl/
brake - break /breɪk/
grate - great /greɪt/
male - mail /meɪl/
pain - pane /peɪn/
pray - prey /preɪ/
rain - reign - rein /reɪn/
sale - sail /seɪl/
slay - sleigh /sleɪ/
stake - steak /steɪ/
Sunday - sundae /'sʌn.deɪ/
tale - tail /teɪl/
wail - whale /weɪl/
wait - weight /weɪt/
waste - waist /weɪst/
way - weigh /weɪ/
/əʊ||oʊ/ /အိုး/ အသံထွက်သည့် စကားလုံးများ။
groan - grown /grəʊ/
hole - whole /həʊl/
know - no /nəʊ/
loan - lone /ləʊn/
road - rode - rowed /rəʊd/
role - roll /rəʊl/
row - roe /rəʊ/
sew - so /səʊ/
sole - soul /səʊl/
/ə/ /အ/ /အာ/ /အယ်/ အသံထွက်သည့် စကားလုံးများ။
altar - alter /'ɒl.tər/
currant - current /'kʌr.ənt/
gorilla - guerrilla /gə'rɪl.ə/
idol - idle /'aɪ.dl/
manner - manor /'mæn.ər/
miner - minor /'maɪ.nər/
/aɪ/ /အိုင်း/ အသံထွက်သည့် စကားလုံးများ။
aisle - I'll - isle /aɪl/
aye - eye - I /aɪ/
buy - by - bye /baɪ/
dye - die /daɪ/
hi - high /haɪ/
hire - higher /haɪər/
rye - wry /raɪ/
sight - site /saɪt/
right - write /raɪt/
tyre - tire /taɪər/
/eər||er/ /အက်အာ/ အသံထွက်သည့် စကားလုံးများ။
air - heir /eər/
fair - fare /feər/
bare - bear /beər/
pair - pear /peər/
stair - stare /steər/
/uː/ /အူး/ အသံထွက်သည့် စကားလုံးများ။
blew - blue /bluː/
flew - flu - flue /fluː/
threw - through /θruː/
to - too - two /tuː/
ABC တို့၏ အသံထွက်များကို လေ့လာရန်။
/əʊ || oʊ/
/ɑːr || ɑːr/
/အားရ် ၊ အား(ရ်)/
/တီး ၊ ထီး/
/zed || ziː/
/ဇက်(ဒ်) ၊ ဇီး/
|| ၏ အရှေ့မှ စကားလုံးသည် (UK) ဖြစ်၍၊ အနောက်မှ စကားလုံးသည် (US) ဖြစ်သည်။
တစ်ချို့သော စကားလုံးများသည် စာရေးသူ၊ စာဖတ်သူတို့ ငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ဖူးသည့် အသံထွက်များနှင့် ကွဲလွဲနေသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။
အဲဒါတွေကို ရှာမှီးပြီး ဗဟုသုတအဖြစ် လေ့လာနိုင်ရန် ရေးသားဖော်ပြပေးထားပါသည်။ UK နှင့် US ကွဲလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ကြိယာပုဒ်မှ နာမ်ပုဒ်အဖြစ် ပြောင်းသွားလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ စကားစု၏ အစစာလုံးသည် အကြီးနှင့်အသေး မတူလျှင်သော်လည်းကောင်း အသံထွက်များ ကွဲလွဲသွားနိုင်သည်။ ယင်းတို့ကို စုံစုံလင်လင် စုစည်းပြီး နောင်တွင်အချိန်ယူ၍ ရေးသားပေးပါမည်။
again /ə'gen/ /-'geɪn/ /အဂက်(န်)/ /အဂေး(န်)/ adv.
aluminium UK /ˌæl.jʊ'mɪn.i.əm/ /အဲလ်ယွတ်မစ်နီယယ်(မ်)/
aluminum US /ə'luː.mɪ.nəm/ /အလူးမစ်နယ်(မ်)/ n.
(aluminium) (နှစ်ကြောင်းစလုံး၏အနက်) - အလူမီနီယံသတ္ထု။
brother /'brʌð.ər/ /ဘရပ်သာရ်/ n.
buffet /'bʊf.eɪ/ /ဘွပ်ဖေး/ n. (ကြိုက်ရာယူစား) ဘူဖေး။
buffet /'bʌt.ɪt/ /ဘပ်ဖစ်(ထ်)/ vt. တွန်းတိုက်၊ ပုတ်ခတ်သည်။
charlatan /'ʃɑː.lə.tən/ /ရှားလတန်(န်)/ n.
chichi /ʃiː.ʃi/ /ရှီးရှီ/ adj. ("ချီးချီး" မဟုတ်ပါ)
confit /kɒn'fiː/ /ကော(န်)ဖီး/ n. ("ကွန်ဖစ်(ထ်)" မဟုတ်ပါ)
full /fʊl/ /ဖွတ်(လ်)/ adj. ("ဖူး(လ်)" မဟုတ်ပါ)
minute /'mɪn.ɪt/ /မစ်နစ်(ထ်)/ n. (writ. abbr. min) - မိနစ်။
minute /maɪ'njuːt/ /မိုင်နျူး(ထ်)/ adj. အလွန်သေးငယ်သော။
monkey /'mʌŋ.ki/ /မပ်င်ခီ/ n. ("မန်းကီး" မဟုတ်ပါ)
mother /'mʌð.ər/ /မပ်သာရ်/ n. ("မားသား" မဟုတ်ပါ)
pull /pʊl/ /ပွတ်(လ်)/ v. ("ပူး(လ်)" မဟုတ်ပါ)
sachet /'sæʃ.eɪ/ /စဲ့ရှေး/ n. ("စဲ့ချက်(ထ်)" မဟုတ်ပါ)
tomato /tə'mɑː.təʊ/ /တမားတို/ /ထမားထို/ n.
tsar UK, tzar, US czar /zɑːr/ /ဇားရ်/ n.
water /'wɔː.tər/ /ဝေါးထာရ်/ n. ("၀ါးတားရ်" မဟုတ်ပါ)
Welsh /welʃ/ /၀က်(လ်ရှ်)/ adj, n. ဝေလပြည်။
welsh /weltʃ/ /၀က်(လ်ခ်ျ)/ vi. ကတိပျက်သည်။
woman /'wʊm.ən/ /၀ွပ်မယ်(န်)/ n.
women /'wɪmɪn/ /၀စ်မစ်(န်)/ pl. n.
zebra UK /'zeb.rə/ /ဇက်ဘရာ/ n. မြင်းကျား။
zebra US /'ziː.brə/ /ဇီးဘရာ/ n. မြင်းကျား။
§ -tion, -sion /-ʃən/ /-ရှဲယ်(န်)/ ဟု ထွက်ပါ။
§ able /'eɪ.bˌl/ /အေးဘယ်(လ်)/
-able /-ə.bl/ /အယ်ဘယ်(လ်)/
§ cable /'keɪ.bˌl/ /ခေးဘယ်(လ်)/
-cable /-kə.bl/ /ခယ်ဘယ်(လ်)/
§ table /'teɪ.bˌl/ /ထေးဘယ်(လ်)/
-table /-tə.bl/ /တယ်ဘယ်(လ်)/
§ son /sʌn/ /စပ်(န်)/ -son /-sən/ /စန်(န်)/
ton /tʌn/ /ထပ်(န်)/ -ton /-tən/ /ထန်(န်)
စသည်ဖြင့် တစ်လုံးတည်းနေလျှင် အသံထွက်တစ်မျိုး၊ နောက်ဆက်ဖြစ်သွားလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အခြား စာလုံးများနှင့် ပေါင်းသွားလျှင်သော်လည်းကောင်း အသံထွက် တစ်မျိုးပြောင်းသွားသည်ကို
§ -curate /-k.juː.reɪt/ /-ခယူးရေ့(ထ်)/ ခ နှင့် ယူး ကို ပေါင်း၍ဖတ်ပါ။
-durate /-d.juː.reɪt/ /-ဒယူးရေ့(ထ်)/ /-ဒျူးရေ့(ထ်)/
-turate /-t.juː.reɪt/ /-တယူးရေ့(ထ်)/ /-တျူးရေ့(ထ်)/
ဒျူး ၊ တျူး စသဖြင့် ဖတ်ပါ။
§ -tain /-tɪn/ /ထစ်(န်)/ ဟု အသံထွက်ရပါမည်။
ဥပမာ - fountain /'faʊn.tɪn/ /ဖောင်းန်ထစ်(န်)/
§ air /eər/ /အက်(ယ်)ရ်/ အဲယား ဟု မထွက်ရ။
bear /beər/ /ဘက်(ယ်)ရ်/ ဘဲယား ဟု မထွက်ရ။
§ near /nɪər/ /နစ်အာရ်/ (နစ်၊ အာ) နှစ်လုံးကို ပေါင်း၍ အမြန်ဆိုရမည်။
§ (-်) ကွင်းထဲမှ အသတ်ပါသည့်အသံများကို ထွက်၍ဖတ်ပါ။ ကွင်းအပြင်မှ အသတ်ပါသည့် အသံထွက်များသည် မပါဘဲလည်း မနေရ၊ ပေါ်လည်းမပေါ်စေရ။
ဥပမာ air ကို ကြည့်ရအောင်။ /eər/ /အက်(ယ်)ရ်/ အဲယား ဟု မထွက်ရ။ (ယ်) သံကို ထွက်ရပြီး၊ ရ် သံကို ထွက်ရန် မလိုပါ။ ထွက်လျှင်လည်း ရေးရေးသာ ထွက်ရမည်။
/eər/ ကို ခွဲကြည့်ကြစို့။
/e/ /အက်/ /ə/ /အ/ အက် နှင့် အ ကို မြန်မြန်တွဲဆိုရမည်။ /r/သည် /eə/ ကဲ့သို့ တစ်တန်းတည်းမနေဘဲ အပေါ်တွင် ရေးထားသည်။ သို့သော် အမေရိကန် အင်္ဂလိပ်တွင် /er/ /အက်(ရ်)/ ဟူ၍ (ယ်) သံပျောက်ပြီး /(ရ်)/ သံကို ထွက်ဆိုလေ့ရှိသည်။ နောင်တွင် (UK || US) အသံထွက် နှစ်မျိုးပါသည့် အဘိဓါန် ရေးသားပြုစုရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါသည်။
၀န်ခံခြင်း။ ။ဆရာဦးစိုးလွင်၏ Phonetic အသံထွက် ဖတ်နည်းလမ်းညွှန် စာအုပ်မှ ကူးယူတင်ပြထားပါသည်။
Credit to http://www.myanmar-network.net/forum/topics/phonetic